Warbixin: Ciidamada Xoogga Dalka o Maanta u dabaal dagaya 12-ka April oo ku beegan aas aaska xoogga dalka – Kismaayo24 News Agency
Warbixin: Ciidamada Xoogga Dalka o Maanta u dabaal dagaya 12-ka April oo ku beegan aas aaska xoogga dalka
by admin 12th April 2018 064
Maanta oo ah 12-ka Apriil, waxay ku beegan tahay aas-aaskii Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waana markii dhidibada loo dhigay Ciidan Difaac oo uu Dalku leeyahay, sidaasi darteed aan wax ka xusno taariikhdii aas-aaskii Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed:
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Waxaa la aas-aasay 12kii-April 1960kii oo waqtigan laga joogo muddo 58-sanadood waxa uuna ka kooban yahay afar talis oo kala ah: ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka.
Ugu horayntii markii la yagleelayay ciidanka Xoogga dalka waxaa lagu aas-aasay 8 horimood,waxaana taliyihii ugu horeeyay ee uu yeesho noqday Allaha u naxariistee Gen. Daauud Cabdulle Xirsi, sidoo kale waxaa Abaanduulaha Xoogga Dalka loo magcaabay Allaha u naxriistee Gen. Maxamed Siyaad Barre, Waxaana ciidamadii ugu horreeyay ee Soomaaliya yeelato laga kala keenay labadii qeybood ee dalka ee ka xoroobay gumeystayaashi Ingriiska iyo Talyaaniga.
Xilligii dowladdii kacaanka ciidamada Xoogga dalka waxay ka gaareen xagga dhismaha iyo farsamada heer aad u sarreeya iyagoo ka soo qayb qaatay howlgallo nabad ilaalin ah oo ay ka soo fuliyeen dalal ka tirsan qaarada afrika oo ay ka mid tahay Ugandha, taasi oo horseeday in loogu yeero Libaaxyada Africa.
1976 waqtigaas oo ahayd hal sano ka hor dagaalkii 77 waxaa lagu tilmaami karaa xilligii uu ugu itaalka waynaa C.X.D wuxuuna ka koobnaa:-23 Guuto oo ciidanka lugta ah, 2 Guuto oo Komaandooska ah, 9 Guuto ooTaangi ah, 9 Guuto oo madaafiicda Goobta ah, 4 Guuto oo ciidanka Difaaca ah, Ciidanka Cirka dayaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 dayaaradood, 24 ka mid ah waxay ahaayeen Miig.
Qeybaha ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya sida qeybta 60-aad ee magaalada Baydhabo, qeybta 21-aad ee magaalada Dhusamareeb, iyo qeybta 26-aad ee magaalada Hargeeysa, iyadoo ay Saldhigyadu kala ahaayeen 43-aad ee magaalada Kismayo, iyo 54-aad ee magaalada Garowe, Ciidanka Badda saldhiyadooda waxay ku yaaleen magaalooyinka Muqdisho , Kismayo iyo Berbera.
Nasiib wanaag waxaa sanadahan dambe dib u bilawday qorshayaal dib loogu yagleelayo Ciidamadii qaranka ee wehelka u noqon lahaa dalkaan iyo dadkiisa mudada dheer Baylahda ahaa.
Munaasabadda 12-ka April ee sanadkan 2018ka oo ah sanadguuradii 58aad ee ka soo wareegtay aas aaska Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya, waxay ku soo beegantay xilli Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku tallaabsaday horumarro dhinacyo badan leh, islamarkaana ay socdaan qorshayaal kor loogu qaadayo Tayada iyo hoggaan wanaagga Ciidanka xoogga dalka.
Dadaalada jira waxaa hormuud ka ah Madaxwaynaha J.F.S md. Max’ed C/llaahi Farmaajo oo Xafiiskiisa labaad ee shaqo maalmeedkiisa ka samaystay Xarunta wasaaradda gaashaandhigga, si uu uga mira dhaliyo ballan qaadkiisii ahaa dhismo ciidan qaran oo gudan kara waajibkiisa isla markaana hela xuquuqdooda.
Munaasabadda lagu xusayo 58-guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 April ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qeybgalay Madaxda ugu sarreysa dalka iyo Taliyayaasha Ciidamada, iyadoo dhinaca kalena Madaxda Qaranka ay Hambalyo ku aadan Xuska 12ka April u direen Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna sanadkaan ay u dabaal degayaan sanad guuradii 58 aad.
Akhriso: Nuxurka Khudbaddii is casilaadda guddoomiye jawaari uu xildhibaanada ka horjeediyay
Wareegto: Shariif Xasan oo Xilkii ka xayuubiyay Taliyhii Nabad Sugidda Koonfur Galbeed
Waddooyinka oo maalintii Labaad xiran, iyo Amniga Villa Somalia oo la adkeeyey
DEG DEG: Ciidamada Gaashaan oo Goordhaw la wareegay Xarunta Baarlamaanka kadib markii laga war helay in…..
Tifaftiraha K24 5th February 2017
Qaramadda Midobe oo ka hadashey qaraxyadda soo noqnoqdey ee Muqdisho, iyagoona………..